Features of outdoor optical cable - မိုးလုံလေလုံဆက်သွယ်ရေး Cable ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအဆောက်အဦးအပြင် Optical Fiber Cable ကိုတွင်အာရုံစူးစိုက်
နေအိမ် » Features of outdoor optical cable
2 Because the outdoor optical cable is used outdoors, it must haveawaterproof function. ယေဘုယျအားဖြင့်, the outer sheath used is made of PE material, and its internal structure is generally divided intoacentral tube structure andalayered structure. From the naked eye, the indoor and outdoor jackets are generally yellow or orange PVC materials, and the outdoor ones are black PE jackets. Different from the model, the outdoor jacket generally has the word GY.
ကွမ်ကျိုး Comax တယ်လီကွန်မြူနီကေး Fiber Cable ကို CO ။, , LTD © 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.သင်္ဘောပေါ်လစီပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ